Kulodokotela Owetheswa Icala Lokuthatha Izigulane Ezilegcikwane leCoronavirus eHarare Ezozihlinza eGwanda
Ntulikazi 18, 2020
Izakhamizi zeGwanda zits sezidlela evalweni ngenxa kadokotela lo.
Izakhamizi edolobho leGwanda zidla amalahle kulandela imbiko ethi kulodokotela othatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane weCovid 19 kwezinye izibhedlela ezibalisa eziseHarare leGweru ezozihlinzela esibhedlela esikhulu seGwanda.
Kumbiko oqale ukubhodabhoda ebulenjini beWhatsapp izolo kubikwa ludokotela ehlinze esinye isigulane ebesilomkhuhlane weCovid 19 osekufake ezinye izigulane labongi engozini, kubikwa njalo ehlinze omunye umntwana ovele eGweru okubikwa sevalelwe kuquarantine.
UMnu Ndaniso Mpande oyisakhamuzi seGwanda uthi kumele athathelwe amanyathelo ludokotela.
Kutsho uMpande: "Thina iGwanda besiyazi iyiyo ehambisa izigulane eUBH uma sezehluleka ukuba zelatshwe lapha eGwanda kodwa yena sesimbona kunguye oseletha izigulane ezisusa eUBH eziletha lapha eGwanda akuyasimangalisa njalo kuyasidanisa lokhu besicela ukuthi ngabe iMinistry iyakukhangela lokhu ajeziswe ludokotela."
UMqondisi wezempilakahle eZansi yemaNdebeleni uNkosikazi Rudo Chikodzore utshele lumsakazo ukuthi udaba lukadokotela lo basaluphenya.